Canada Kufamba Nhau | eTurboNews
musha » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Kanada Breaking News » Page 16
Chikamu - Canada Breaking News
Breaking news from Canada - Travel & Tourism, Fashoni, Varaidzo, Culinary, Tsika, Zviitiko, Chengetedzo, Chengetedzo, Nhau, uye Maitiro.
Canada inyika iri kuchamhembe kweNorth America. Matunhu ayo gumi nematunhu matatu anotambanuka kubva kuAtlantic kusvika kuPacific uye kuchamhembe kuArctic Ocean, inosvika 9.98 mamirioni emakiromita, ichiiita nyika yechipiri pakukura pasirese nenzvimbo yakazara.
Hurumende inotsigira Basa reGay Gay Canada ku ...
Kurova kuCanadian National Railway?
WestJet inodoma mutungamiri mutsva weWestJet Encore
Musikana mudiki akanunurwa mushure mekunge shumba yegungwa yakamukwevera mukubatikana ...
Mapaki Canada anotanga 2017 Yevashanyi Mwaka
Nhandare dzeCanada dzinogamuchira kubatanidzwa kwehurumende ...
Mapaki Canada anotangisa nharembozha ye 2017 yevashanyi ...
Canada inorambidza kubvisa kusazvipira kwevafambi kubva ...
WOW Mhepo ikozvino ichibatanidza Montreal neTel Aviv
Le Boat inotanga Rideau Canal kubhuka kwe2018 kufamba ...
Interjet inozivisa nzira nyowani pakati peCanada neMexico
Air Canada Rouge yekupa yakakwira-kumhanya Internet
Air Canada yekutanga chirongwa chavo chekuvimbika muna 2020
Canada yeNew Tourism Vision yakavhurwa kuRendez ...
ICCA: Montreal inonyanya kufarirwa guta reNorth America kwe ...
Disney Cruise Line iri kuuya kuPort of Quebec mu ...
Westjet Kubvumbi 2017 traffic
Toronto Pearson Airport inotora danho kusangana nekukura ...
Zvese hazvisi Zvakarasika kune Yekufambisa Indasitiri
Kushungurudzika kwemamiriro ekunze inyaya yevanhu
WestJet inotangisa ndege yeCalgary yekutanga isingamire ...
Vaviri veCalgary vanoti "ndinoita" muCalgary ...
Ed Sims ajoina WestJet seMutevedzeri Wemutungamiriri wenyika
WestJet inotangisa Abbotsford-Winnipeg nzira
Canada: Zvinotaurwa naBoeing manyepo, hazvina musoro
Canada inotangisa Rail Kwevhiki Yekuchengetedza
Chirevo cheCanada Mutungamiriri wenyika paZuva rePasi
Air Canada inoshandisa biofuel ndege
Nzvimbo nyowani dzekushanya dzinopaza pasi muHalifax, Nova ...
Ultra yakachipa-inodhura nendege inotakura inotangwa ne ...
Vafambi veCanada vanosarudza pekugara zvine hushamwari
Royal Tour: Muchinda Charles naCamilla vanoshanyira Canada ...
pashure 1 ... 14 15 16
Gurukota rezvekushanyirwa kweJamaica Anodomwa Mumiriri mutsva weGITT December 2, 2021
Gurukota rezvekushanyirwa kwenyika reJamaica, Hon. Edmund Bartlett (anoonekwa kurudyi pamufananidzo) anogamuchira Mubairo wake weHurumende neInstitutional Travel and Tourism (GITT) kubva kuna Sachigaro uye CEO weTourism Optimizer Platform, Diego Fuentes Díaz, uyo akaona nekutsanangura GITT sepfungwa nyowani mukati meTourism Indasitiri.
Ukraine kuenda kuTel Aviv nendege paUkraine International Airlines izvozvi December 2, 2021
Ukraine International Airlines inopa zano rakasimba kuti rinyatso tarisisa kugadziridzwa kwemitemo uye zvirambidzo zvechirwere chenyika inoenda.
Ecuador neGalápagos Islands dzinozivisa zvitsva zvinodiwa zvekupinda December 2, 2021
Ecuador ndeimwe yenzvimbo shoma dzepasirese uko vagari vemuUS vanogona kufamba panguva ino vasina kugariswa.
Wese Munhu Ari Kubhururuka kuenda kuUnited States Anoda Kuwana Nyowani Negative COVID-19 Muedzo mukati memaawa makumi maviri nemana December 2, 2021
Mitemo yekupinda yeUnited States of America ichangochinja mushure mekunge Mutungamiriri weUnited States Biden aita chiziviso panhepfenyuro yenyika. WTN iri kuti US haisi kuenda kure zvakakwana.
France inoisa Mauritius parunyorwa rwayo rutsva rwe 'ruvara rutsvuku' December 2, 2021
Indasitiri yezvekushanya yeMauritius inobvuma danho rehurumende yeFrance rekuisa Mauritius parunyorwa rwayo rutsva rwe“ruvara rutsvuku” kwenguva pfupi, pamwe chete nedzimwe nyika pfumbamwe muSouthern Africa.
China inobvisa Boeing 737 MAX kudzokera kumatenga ayo December 2, 2021
Vatyairi vendege veChinese vachada kupedzisa kudzidziswa kutsva ndege dzekutengesa dzisati dzatanga nepo Boeing ichidikanwa kuisa imwe software uye zvikamu.
Zvitsva zveUS zvirambidzo zvekufamba mushure mekutyisidzira kweOmicron December 2, 2021
New Calgary kuenda kuLondon Heathrow ndege paWestJet izvozvi December 2, 2021
Iyo nzira nyowani inopa mukana wekuenda kunhandare huru yeLondon ine pedyo uye nekukurumidza kupinda kunzvimbo dzakakosha muLondon.
Kurambidzwa kwekufamba kweOmicron kutsva kuri kutyisidzira kupora kwekufamba nendege December 2, 2021
Mafambiro emumigwagwa yaGumiguru anosimbisa kuti vanhu vachafamba kana vachinge vatenderwa. Nehurombo, mhinduro dzehurumende pakubuda kweiyo Omicron musiyano iri kuisa panjodzi kubatana kwepasirese iyo yakatora nguva yakareba kuvaka patsva.
Germany inozivisa zvirambidzo zvitsva zvine hukasha kune vasina kubayiwa December 2, 2021
Pasi pezvirambidzo zvitsva, vanhu vasina kubayiwa vanozorambidzwa kubva kumaresitorendi, matheatre, uye zvitoro zvisina kukosha. Makirabhu ehusiku anofanirwa kuvharwa munzvimbo dzine hutachiona, ukuwo zviitiko zvakakura zvichiona huwandu hwevaoni huchidzikiswa.
Paunorara Kwakakosha Kupfuura Nguva Yaunorara December 2, 2021
Vatsvagiri veZOE, kambani yesainzi yehutano, pamwe chete nechikwata chepasi rose chevanozivikanwa kurara uye metabolism masayendisiti kubva kuUK, US, […]
Iri Zuva Idzva kuUNWTO iGiant Danho rekufamba, Tourism, uye World Economy December 2, 2021
Nhasi, remangwana reWorld Tourism Organisation (UNWTO) rinotaridzika zvakanyanya kujeka. Zurab Pololikashvili anobva kuGeorgia akasimbiswa zvakare seMunyori Mukuru musarudzo yakavanzika iyo hapana achakwanisa kubvunza. Uku kuhwina/kuhwina kwevazhinji. Heino chikonzero.
Genital Psoriasis: Migumisiro yeChidzidzo Chitsva December 2, 2021
Amgen nhasi akazivisa zvakanaka mutsara wepamusoro mhedzisiro kubva muyedzo yeDISCREET, Phase 3, multicenter, randomized, placebo-inodzorwa, kaviri-mapofu kudzidza kuongorora kushanda kweOtezla® (apremilast) muvakuru vane mwero kusvika kune yakanyanya genital psoriasis uye ine mwero kusvika. yakaoma plaque psoriasis.
Kutsiva Canada's Fighter Jets neItsva December 2, 2021
Sechikamu chegwaro rayo redziviriro, "Yakasimba, Yakachengeteka, Yakabatanidzwa," Hurumende yeCanada iri kutora makumi masere nemasere ndege dzehondo dzeRoyal Canadian Air Force (RCAF) kuburikidza nehurongwa hwemakwikwi huchaita kuti zvinodikanwa zveRCAF zvizadziswe uku vachiona. kukosha kwakanyanya kune veCanada.
Yekutanga-nhanho Yekenza Yezamu Varwere Vanogona Zvino Kudzivirira Chemotherapy December 2, 2021